Tag: Aragtida koowaad | Martech Zone
Tag: Dareenka koowaad
Isniintii, September 17, 2012 Isniintii, September 17, 2012 Meen Boriboune
"Marna ma heleysid fursad labaad oo aad aragtidaada ugu horreyso ka sameysid," macallinkeyga ganacsiga, Marvin Recht, wuxuu had iyo jeer xusuusiyaa ardaydiisa. Ha sameyn khaladaadka dad badani kaa horeeyeen. Adduunyada maanta, fikradda ugu horreysa ee aragtida ayaa wali run ah. Si kastaba ha noqotee, macaamiisha dijitaalka ah iyo warbaahinta bulshada ayaa noo oggolaanaya inaan ku xirno qaabab aannaan waligeen hore ku yeelan karin. Iyo aragtida ah inaad ka tagto boggaaga Facebook, Twitter-ka, ama websaydhka qaar ayaa yeelan kara
Isniin, Janaayo 19, 2009 Talaado, Oktoobar 7, 2014 Douglas Karr
Immisa qof ayaa raadinaya qof garanaya waxaad sameyneyso? Hada… imisa qof ayaa dhabtii ku raadinaya? Marka… haddii aad jeceshahay in lagaa helo internetka waxa aad sameyso, maxaad magacaaga ugu iibsaneysaa sidii magac domain ah oo aad u dul dhigeysaa blog? Waxaa laga yaabaa inaadan rabin. Iibso magac domain ah oo marka hore ka tarjumaya waxaad qabato. Ilaa ay dadku ogaanayaan qofka aad tahay, waa sidan